Uphengululo lweOpera: IZiko leLincoln 'uDon Giovanni' Yiloo nto eyayizimiselwe nguMozart - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa IZiko elincinci laseLincoln 'uDon Giovanni' yile nto kanye uMozart ebeya kuyifuna
Isiphelo esincinci kodwa esoyikisayo ku'Don Giovanni 'URichard Termine
Impikiswano eqhubekayo kwimveliso yeopera namhlanje ngumbuzo weenjongo zomdali, oko kukuthi, indlela umqambi awayenokulindela ngayo ukuba umsebenzi wakhe ujonge kwaye uvakala eqongeni.
Loluphi uhlobo lwezwi, umzekelo, iBizet ebenalo engqondweni ngendima yesihloko UCarmen , isoprano okanye imezzo? Ubungakanani bokuhlaziywa kwamanqaku abhaliweyo uBellini ebeya kulindela kuye Umthetho ? Kwaye uWagner angayamkela eyakhe IParsifal ibekwe phantsi kohola wendlela kwi-post-apocalyptic America?
Inyani yokuba ezi mpikiswano zisekwe ikakhulu kuqikelelo ayizothusi izichasi. Ngapha koko, likho iqela le-Facebook elichasayo ekuthiwa yimveliso yeopera ye-opera, kwaye ngokwendalo, elinye iqela elithandayo. Isihloko esinye, nangona kunjalo, asihlali sijongiwe: ubungakanani beqonga lokwenziwa kweopera.
IMetropolitan Opera, umzekelo, inezihlalo ezimalunga nama-3,800, yindawo enkulu kakhulu kuneendawo zabaqambi abakhulu be-opera ababecinga njalo. Kwaye iMet yenza imisebenzi efana neMozart UDon Giovanni , iqhekeza elisondeleyo, elaqala ukuboniswa okokuqala ngo-1787 ePrague’s Estates Theatre elinabantu abamalunga nama-650 — phantse ezo zezona zindlu zincinci zeNewroad zeNew York.
Ke ithuba lokubona UDon Giovanni kwindawo yemidlalo yeqonga ekufutshane nobukhulu bamabala ayisixhasi nje kuphela ubunyani, kodwa, njengoko evezwe kwiveki ephelileyo Inkoliso ye-Mozart ye-opera etyhiliweyo, inokuba sisityhilelo. Yenziwe yaza yalawulwa ngu-Iván Fischer, le mveliso eRose Theatre eJazz e-Lincoln Centre (umthamo we-1,100) iphumelele ngokulula, kwindlu enkulu ivakalelwa kukuba ii-opera zeMozart ziphantse zafikelela.
Into ebonakalayo yale mveliso yayilula ngokwayo: ukungabikho kwamakhethini amnyama ajikeleze amaqonga amaqonga. Ngaphakathi kwesi sithuba singathathi hlangothi, iqela leemvumi kunye nabadanisi elenziwe ngemhlophe emhlophe liphakamise zombini uyilo kunye nemvelaphi eyongezelelweyo. Ngomzuzu omnye obukekayo, umtsalane wamantombazana ahlanjelweyo amile ngobubele kwaye azilungiselela kwi-gazebo emva kokuba umtshakazi otyhafileyo uZerlina angazimela.
Ngokwendalo, ukugxila kwehla kwiimvumi zodwa, ezathi ubukhulu becala zanikela ngemidlalo ebuthathaka, eneenkcukacha. Owona mhle kubo bonke yayinguChristopher Maltman, ibitroni yakhe emnandi evakalisa uku-odola kunye ne-mercurial, umdlalo ofanelekileyo kwinqanaba lakhe lokuziphatha. Njengophulwe nguDonna Anna, isoprano uLaura Aikin usenokuba uswele amandla okugqibela, kodwa wayalela ukuba akhombise ubugorha be-aria engekho mi dir kwisenzo sesibini.
Ukuba iimvumi eziseleyo zazingafani neenkwenkwezi, zenza iqela eliqinileyo, elinamandla. Kwaye ngelixa ukudlala i-Orapstra ye-Budapest Festival kwakungeyiyo le nto uMozart wayeza kuyifuna-umqambi wenkulungwane ye-18 ngokuqinisekileyo wayeza kuphakamisa ishiya kwimitya ye-vibrato yanamhlanje-ndicinga ukuba ngewayemhle ngokuvuya kukuhlaselwa liqela okungathandekiyo kunye nesandi esimnandi.
Umculo uLemmy oShiyekileyo ngasemva ukhulu ngakumbi kunentsomi yakhe
Inyaniso malunga neMigodi yeDatha: Indlela abaKhangeli be-Intanethi abaQokelela ngayo ulwazi lwakho kunye noko bakubonayo
I-DNC isabhatala uDonna Brazile, uMvuzo uWasserman Schultz wokuSekwa ​​ngokunyaniseka
spider-man: ukubuyela ekhaya
Iziphumo zokucoca isibindi
Ingelosi yokulwa ingelosi james cameron
yahlulwe imo yempambano 4
iimveliso ezikunceda ukunciphisa umzimba
ukuba kukhethwe intaba clinton
Umgaqo wokufa kwabantu abathathu abadumileyo